Navadik'i Biden ny baiko napetrak'i Trump mandrara ny TikTok - mety ho vaovao tsara ho an'i Huawei ity? | Avy amin'ny Linux
Vao tsy ela akory izay no nivoaka ny vaovao fa ny filoha Joe Biden dia nanao sonia ny didim-panjakana izay manafoana ny fandraràn'i Trump ao amin'ny TikTok sy WeChat.
Raha tokony hanafatra an'i Trump, Joe Biden hanome toromarika ny sekreteran'ny varotra hanadihady ireo fangatahana misy fifamatorana amin'ireo mpifaninana vahiny izay mety hiteraka risika amin'ny tsiambaratelo momba ny fiainana manokana na ny filaminan'ny firenena amerikana.
Didin'i Executive Biden mikendry ny hametraka 'rafitry ny fanapahan-kevitra mifototra amin'ny mason-tsivana' voarindra kokoa ho an'ny fandrarana mety. Ity no farany indrindra amin'ny andiana fepetra mifandraika amin'i Shina nataon'i Joe Biden mialoha ny diany voalohany tany Eropa, izay ny fampihenana ny fanararaotan'i Beijing no singa iray lehibe amin'ny fandaharam-potoanan'ny fihaonana amin'ireo mpitarika ny G7 sy ny OTAN.
Tamin'ny taon-dasa, nilaza i Donald Trump fa ny fampiharana izay ampiasain'ny orinasa sinoa "dia mandrahona ny filaminana nasionaly, ny politika ivelany ary ny toekarena any Etazonia."
TikTok sy vondron'ireo mpampiasa WeChat monina any Etazonia dia nitory an'i Trump noho io fanapahan-kevitra io ary nanakana ny fandrarana ny fitsarana, ary noho ny fanerena avy amin'ny fitantanan'i Trump, dia nanandrana nivarotra ny ampahany tamin'ny TikTok i ByteDance, saingy nampiato ny fivarotana tamin'ny volana febroary.
Ny baiko mpanatanteraka vita sonia dia manolo andiana baiko mpanatanteraka navoakan'ny filoham-pirenena Trump tamin'ny taon-dasa izay nanakana ny fampiharana toa ny TikTok, WeChat ary Alipay avy amin'ny magazay fampiharana any Etazonia.
“Ny fitondrana dia manolo-tena hampiroborobo ny Internet misokatra, tsy azo iasa, azo antoka ary azo antoka, miaro ny zon'olombelona amin'ny Internet sy ivelan'ny Internet, ary manohana toekarena nomerika manerantany. Ny fanamby atrehinay amin'ity didim-panjakana ity dia ny hoe ny firenena sasany, anisan'izany i Shina, dia tsy mizara ireo fanoloran-tena na soatoavina ireo fa manandrana mampiasa ny angon-drakitra amerikana sy ny teknolojia nomerika amin'ny fomba izay mety hampidi-doza ny filaminana nasionaly. "Hoy ny tompon'andraikitra ambony iray ao amin'ny fitantanan'i Biden
Ny kaomisiona vaovao nataon'i Joe Biden dia hangataka amin'ny Departemantan'ny Varotra handinika ireo fangatahana mifandraika amin'ireo fahavalo vahiny ary hamaritra izay tokony hoheverinao ho "risika tsy azo ekena", araka ny tatitry ny White House.
Anisan'izany ny fifampiraharahana mifandraika amin'ny fampiharana manana na voafehy avy amin'ny "olona izay manohana ny hetsika ara-tafika na fitsikilovana ataon'ny fahavalo vahiny, izay tafiditra amin'ny hetsika cyber manimba, na izay manangona angon-drakitra tsiambaratelo."
Raha ny Komity momba ny fampiasam-bola avy any ivelany any Etazonia, CFIUS, dia manadihady ny fanakambanam-bola na fampiasam-bola avy any ivelany, ny baiko mpanatanteraka dia nanonona fepetra Trump teo aloha izay mamaritra ny fifampiraharahana amin'ny ankapobeny mba hahitana ny fametrahana na famindrana misy serivisy serasera ho an'ny fifandraisana.
Ny fitantanan-draharaha Biden dia nanohy nanambara ny amin'ny fomba tsy hitovizany amin'ny fomba akaiky an'i Shina amin'ny an'i Trump., fampiharana politika mahery setra izay lazain'ny tompon'andraikitra fa mifanaraka amin'ny soatoavina amerikanina.
James Lewis, filoha lefitra zon'ny Ivotoerana misahana ny tetikady stratejika sy iraisam-pirenena, dia nilaza fa ny fitondrana Biden dia tsy naseho hanalefaka ny fihetsika henjana ataon'ny governemanta amin'i Shina. Saingy ny didim-panjakana vaovao dia mametraka fepetra marimarina kokoa momba ny fanombanana ireo loza ateraky ny TikTok sy ireo orinasa hafa an'ny fahavalo vahiny toa an'i Shina.
Ny baiko mpanatanteraka teo aloha Trump dia natao indrindra handrarana ilay fampiharana fizarana horonantsary malaza TikTok sy ilay fampiharana fandefasan-kafatra WeChat any Etazonia. Nosakanan'ny fitsarana vonjimaika ireo fandrarana ireo satria ny olana ara-pilaminana napetraky ny fitantanan'i Trump Erana be loatra vinavina na manjavozavo loatra.
Ary ny fitantanan-draharaha Biden dia mikasa ny hamorona fomba tsara kokoa amin'ny famaritana sy ny firaketana an-tsoratra ny olana momba ny filaminam-pirenena mba hahafahan'ny fandraràna fampitana data mety hahatanty fanamby ara-dalàna.
Ity baiko vaovao ity dia ny hetsika farany nataon'ny fitondrana Biden hiatrehana ireo fanamby napetrak'i Sina. Tamin'ny herinandro lasa teo dia nanao sonia didim-pitondrana iray hafa i Joe Biden izay nanitatra ny fandraràn'ny vanim-potoana Trump ny fampiasam-bola amerikanina amin'ireo orinasa sinoa izay misy ifandraisany amin'ny tafika sinoa. Ny didim-panjakana dia mitanisa ireo orinasa 59 voarara tsy hampiasa vola, ao anatin'izany ireo izay mamorona sy mametraka teknolojia fanaraha-maso ampiasaina amin'ireo silamo vitsy an'isa sy ireo mpanohitra ny governemanta ao Hong Kong.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Navadik'i Biden ny baiko napetrak'i Trump mandrara ny TikTok - mety ho vaovao tsara ho an'i Huawei ity?